ကွာလာလမ်ပူမြို့ မြန်မာအရောင်းဆိုင် အကြမ်းဖက်သမားများ ဖျက်ဆီး မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ မြို့လယ်က ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ဦးစောအောင် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြန်မာ့ဥယျာဉ် အမည်ရှိ အရောင်းဆိုင်ကို သောကြာနေ့ ညနေ (၅) နာရီလောက်က အကြမ်းဖက်သမားတွေ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
than naing soe နေရပ်-
this is crime.and they are want to destroy peace and rule.
Aug 04, 2012 09:55 AM
Khine Yae Htat
So-called liar rohinja are peace loving people?????????
Aug 04, 2012 08:15 AM
တခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်တော့ ရိုဟင်ဂျာလို့ရေးထားတဲ့ အကျီနဲ့အကြမ်းဖက်သမားများကလို့ ရေးရပါသတဲ့... လူနည်းစုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဆိုင်ကို လူများစုဒေသခံမွတ်ဆလင်များက ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးလို့ ရေးရင် နိုင်ငံအားလုံးအပေါ်တူညီတဲ့ရေးသားဟန်ကို ရမှာပေါ့ RFA ရယ်။ Aug 04, 2012 08:10 AM
ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂါလီဆိုတာ ဘာလဲ
အကြမ်းဖက် အယူဝါဒသမားတွေဖြစ်ပါတယ် Aug 04, 2012 06:39 AM